ओलीको भारत भ्रमण र नेपालको सरोकार (विचार)
नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीच स्याण्डबीचको अवस्थामा छ । यस्तोमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्न लागेको राजकीय भ्रमणको विशेष अर्थ छ । विगतमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनरागमनको सम्भावना बढेदेखि नै ओली सरकारको आगामी छिमेकी नीति र सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयले छिमेकीको नेपालप्रतिको चासो ह्वात्तै बढेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओली प्रधानमन्त्री बन्नुपूर्व नै फोन गर्नेदेखि विशेष दूतका रूपमा आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई नेपाल पठाएर भारत भ्रमणको निम्तो दिनु पक्कै उसले नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा गरेको हो । यता, ओलीले समेत विगतकै परम्परालाई अँगाल्दै भारतबाटै पहिलो विदेश भ्रमण सुरू गर्दा उनी पनि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन तत्पर रहेको अथ्र्याउन सकिन्छ ।
विकास र समृद्धिको नारा बोकेको नयाँ सरकारले दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा नलिएसम्म आर्थिक विकासको अभियानलाई लक्ष्यमा पु¥याउन सहज नहुने भएकाले पहिलो भ्रमण जहाँबाट थाले पनि सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न सकिन्छ । नेपाल, भारत र चीनजस्ता पुरानो सभ्यता, ठूला भूभाग र जनसंख्या भएका तर विभिन्न हिसाबले प्रतिस्पर्धी आकांक्षा र विशेषता भएका मुलुकको बीचमा छ । ती दुई मुलुकका राजनीतिक व्यवस्था तथा ऐतिहासिक आकांक्षा अहिले झन् बढी प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेका छन् । यसरी दुई छिमेकीको बढ्दो भूरणनीतिक प्रतिस्पर्धा र एसियाको उदयको नेतृत्व गरेका छिमेकी र पश्चिमको अन्तरविरोधको बीचमा नेपाल उभिएको छ ।
यो अवस्थामा आफ्नो राष्ट्रहितलाई पहिलो स्थानमा राख्दै छिमेकी सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्न भने चुनौती भइरहनेछ । चीनले सधैं नेपाललाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सुझाव दिँदै आएको छ र आफू नेपालमा भारतको विकल्प बन्न नसक्ने पनि पटक पटक स्पष्ट पारेको छ ।
आर्थिक महाशक्तिका रूपमा आफूलाई विश्वव्यवस्थाको महत्वपूर्ण पिलरका रूपमा उभ्याउन खोज्दै गरेको चीनका लागि अब तिब्बतको सुरक्षा मात्र नेपालमा चासो रहेन ।
विगतमा आन्तरिक अस्थिरता र दक्षिणको भूरणनीतिक मनोविज्ञानबाट उत्पन्न अवरोधका कारणले नेपालको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । तर, यतिखेर स्थिर सरकार पाएको छ र स्वयं समृद्धि तथा विकासका लागि भारतसँगको साथ ओलीलाई चाहिएको छ ।
यतिबेला भारतको चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले चीन, नेपाल र भारतको त्रिशंकु सम्बन्धको सहकार्यको नीति निर्माण गरी पहल गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । आर्थिक अन्तरनिर्भरता निर्माणले आपसी विश्वास बढाउँदै हिमालय क्षेत्रमा हुने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कम गर्नेछ ।
भारतले पनि नेपालमा दक्षिणदेखि उत्तर जोड्ने आर्थिक करिडोरमा लगानी गर्नुपर्छ । तर यी सबै गर्नका लागि समस्या छ त नेपालका राजनीतिक शक्तिमै, शक्ति आर्जनका लागि आफैं प्रो–इन्डियन अथवा प्रो–चाइनाका रूपमा अगाडि आउँदा छिमेकीले नेपालको राज्य प्रणालीप्रति विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले दक्षिण र उत्तरतिर फर्किएका नेपालका राजनीतिक दलहरूकै कारण नयाँ सरकार आउने बित्तिकै कहिले कुन छिमेकी दंग पर्छ त कहिले कुन हिस्स । नेपालले कुनै छिमेकीको कुभलो चिताउने र एक छिमेकीसँग नजिक र अर्कोसँग टाढिने गर्नुहुर्दैन र कुनै पनि नाममा कुनै पनि छिमेकीको परिबन्दमा समेत पर्नुहुँदैन । तर ख्याल के पु¥याउनुपर्छ भने एउटा छिमेकीसँग सहकार्य गर्दा अर्कोलाई चिढाउने अथवा उसको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्ने गर्नुहँुदैन ।
छिमेकीका लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा राष्ट्रिय सहमति तयार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय राजनीति नै दुई छिमेकीको पक्षमा धु्रवीकृत भएर नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलन गुमेर नेपाली भूमि रणनीतिक खेल मैदानमा परिणत नहोस् ।
अतः नेपालले यतिखेर स्थिर सरकार पाएको छ । साथै आर्थिक, राजनीतिक रूपमा उदीयमान छिमेकीको बीचमा अवसर र चुनौती दुवै लिएर उभिएको छ । यसैले यो समयमा, हाम्रा छिमेकी कस्ता छन् ? तिनीहरू हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् ? त्यसले हामीलाई कस्तो चुनौती र अवसर खडा गरेको छ ? उनीहरूका नेपालप्रतिको चासो केके हुन् भन्ने यी विषयमा नेपालले गम्भीर मनन गरेर छिमेकी नीति अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । देशको भूगोलसँग परिचित हुँदै विशाल छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै आपसी सहकार्यको मोडलमा छिमेकी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सके छिमेकी सम्बन्धको सन्दर्भमा नयाँ आयामसहितको नयाँ युगको सुरूवात हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तीनदिने भारत भ्रमणमा कुनै सम्झौता भन्दा पनि विगतको तिक्तता मेटाउने लक्ष्य राखिएको कारण यो भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट नयाँ उचाइ दिन सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर भारत भ्रमणपछि उनको विगतको नेपाललाई दुवै छिमेकीसँग जोड्ने प्रतिबद्धतामा कस्तो फेरबदल आउला ? छिमेकीसँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला ? त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
अन्त्यमा, भारतलाई विश्वासमा लिएर नेपालले लिन सक्ने फाइदा लिनुपर्छ । हिजो जसरी सम्बन्ध चिसो भयो त्यसलाई भने अब राम्रोसँग सुधार गर्न जरूरी छ ।
मित्र फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सम्भव हुँदैन । नेपाल र भारतको अद्वितीय सम्बन्धका आयामहरूको विकल्प अन्य केही हुन सक्दैन । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नै यस्तो छ कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र राजनीतिक सरोकार एक अर्कासँग गाँसिएका छन् । यसका नाकारात्मक पक्ष नभएका पनि होइनन, तर सकारात्मकताको उपयोगमार्फत द्विपक्षीय हित प्रवद्र्धनलाई उद्देश्य बनाइनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सद्भाव भए पनि देशको कार्यकारी प्रमुखको दौडाहा अर्थराजनीतिक अपेक्षा र उद्देश्यबाट निरपेक्ष हुन सक्दैन ।
प्रकाशित मिति : २०७४ साल चैत्र २३ गते शुक्रबार ।
आँप महोत्सव गरौं (विचार)
आँपको यस्तो प्रचुरता भएपनि हामी यसप्रति अझै अनुदार छौं । आँपको महत्वलाई फैलाउन यसको महोत्सव किन नगर्ने भन्ने प्रश्न आउनु अस्वाभाविक होइन ।
भारतीय र चिनियाँ रेलको अन्तर्कथा (विचार)
केरूङबाट काठमाडौ झारेपछि त्यो रेल कता लैजाने भन्ने सवालमा समाजको तहतप्का अनिर्णित नै छ ।
ओली सरकारमा फोरमको सहभागिताले उत्पन्न गरेको तरंग
मधेशमा आन्दोलनकै बलमा उदाएका दुई ठूला पार्टीहरूबीच फुट ल्याएर मधेश आन्दोलनका धेरै मागहरूमध्ये केही बुँदाहरू संशोधन गर्ने नाममा अन्य मागहरूलाई तुहाएर यादवलाई सत्तापक्ष राजपालाई प्रतिपक्ष बनाउन भनेर गरिएको यो तयारीले भुसभित्रको आगोको भूमिका खेल्न सक्छ ।
रित्तो हात र खाली पेटले शैतानी वातावरण निम्त्याउँछ सरकार
म एक किसानको छोरो । खेति किसानी गरी मेरा वाउ आमाले दुख गरी मलाई पढाए । पढ्न लेख्नमा समान्य विधार्थी भन्दा अलिक तेज नै थिए । वाउ आमाको जिम्मेवारी र आफ्नो मेहनतकै कारण सरकारी जागिरे पनि भए । हेर्दा हेर्दै जागिरको पेनशन पनि पाकि सकेको छ । विधार्थी जिवन पश्चातको जागिरे संघर्सको दौरान देश र परिस्थीतिलाई पनि थोर वहुत वुझ्ने प्रयास गर्दछु । वाच्नको लागी संघर्ष अनिवार्य
मोदीको भ्रमण र राउतको मन्तव्यबारे मच्चिएको रड्डाको (विचार)
जनकपुर आउने उहाँको पुरानै आकांक्षा त थियो नै तर भारतबाट सिधै जनकपुर आएर दिन खोज्नुभएको संदेश मधेश र देशले बुझेको हुनुपर्छ र मधेशले पनि उहाँलाई दिएको अपार माया स्नेह र सम्मानको अर्थ एवं जनकपुरले दिन खोजेको संदेश पनि उहाँले बुझ्नु भएकैले नै शायद ध्यान अन्यत्र मोड्नको निम्ति राज्यद्वारा प्रायोजित रूपमा अनावश्यक धुन्दता सिर्जना गर्न खोजिएको हो ।